ठमेलमा घट्यो अचम्मको घटना , ४ जना पक्राउ ! - हाम्रो देश
ठमेलमा घट्यो अचम्मको घटना , ४ जना पक्राउ !
काठमाडौं- ठमेलमा बस्ने चि’नियाँ ना’गरिकको डेरामा ड’कैती गर्ने चार जना पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरले सिन्धुपाल्चोकका फुलकाजी तामाङ, अमिर तामाङ, बुद्ध तामाङ र रोशन लामालाई पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरुले गत १६ चैतमा ठमेलमा बस्ने चि’नियाँ ना’गरिक युन सि’योमेनको डे’रामा ह’ति’या’र देखाई उनीहरुको हा’तखु’ट्टा बाँ’धे’र ड’कैती गरेका थिए । चि’नियाँ ना’गरिक उनकी श्रीमती अ’ञ्जली र अन्य दुई युवकलाई नियन्त्रणमा लिएर ड’कैती भएको थियो ।
२० लाख न’गद र करिब पाँच लाख बराबरको सुनको गहना ड’कैती भएको थियो । घ’टनाको पाँच दिनपछि अ’भियु’क्तहरु पक्राउ परेका हुन् । उनीहरुबाट चो’रीका केही सामान समेत ब’रामद भएको प्रहरीले ज’नाएको छ ।त्यस्तै काठमाडौंको ना’गढुंगाबाट ४३ लाख नगद र ९ वटा तिलहरीसहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका-२ नागढुंगास्थित चेक पो’इन्टबाट दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-५ का ३७ वर्षीय सन्दीप कौशललाई शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले जानकारी दिए। तुलसीपुरबाट काठमाडौं आएको प्रदेश नम्बर ३-०१-००-६ ख ०९१२ नम्बरको बसभित्रको प्या’सेजमा टेपले र्‍यापिङ गरेको का’र्टुन प्रहरीले फेला पारेको थियो।
कार्टुनभित्र प्रहरीले हेर्दा छ’ड्के ति’लहरीको पोते नौं वटा र ४३ लाख नगद फेला पारेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले सो रकम र तिलहरीसहित कौशललाई पक्राउ गरेको हो। उनले उक्त रकमको स्रोत खु’लाउन सकेका थिएनन्। उनीमाथि महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।